Umhlahlandlela Wokufaka weXubuntu 18.04 LTS | Kusuka kuLinux
Okuhle | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ya ngokukhululwa kwe-Ubuntu 18.04 LTS, amanye ama-flavour alo enze isinyathelo esifanayo ukuvula izinhlobo ezizinzile zalezi. Esimweni esinjalo Ngiza ukuzohlanganyela nawe lo mhlahlandlela omncane wokufaka yeXubuntu 18.04 LTS.
UXubuntu ukhonjwe ngu ube ukunambitheka kobuntu ayidingi izinsiza eziningi zohlelo, ngakho-ke kufakwa kusigaba njengokusabalalisa okulula, ngaphezu kwalokhu lokhu kusatshalaliswa kugcina ukusekelwa kwezinhlelo ezingama-32-bit ngokungafani no-Ubuntu.
Ngaphambi kokulanda, kuyadingeka ukwazi izidingo iqembu lethu elidinga ukukwazi ukusebenzisa i-Xubuntu 18.04 LTS.
1 Izidingo zokusebenzisa i-Xubuntu 18.04 LTS
2 Ungayifaka kanjani i-Xubuntu 18.04 LTS
3 Inqubo yokufaka yeXubuntu 18.04 LTS
Izidingo zokusebenzisa i-Xubuntu 18.04 LTS
Ukuze usebenzise uhlelo futhi ukwazi ukusebenzisa okubalulekile kulokhu sidinga okungenani eqenjini lethu:
Iprosesa ngokuxhaswa kwe-PAE
I-8 GB yesikhala samahhala sediski
Ikhadi lemifanekiso 800 × 600 isinqumo esincane
IDrayivu ye-DVD noma imbobo ye-USB
Izidingo ezinconyiwe ukuba nesipiliyoni ngaphandle kwemikhawulo ohlelweni yilena:
1 RAM kuye phambili
I-20 GB yesikhala samahhala sediski
Ikhadi lemidwebo elisekela okungenani i-1024 × 1280
Ungayifaka kanjani i-Xubuntu 18.04 LTS
Sizoqhubeka nokulanda kusuka kufayela le- iso elisemthethweni wohlelo, Ngincoma ukulanda ngesixhumanisi se-Torrent noma se-Magnet.
Lapho ukulanda sekuphelile, ungashisa iso kwi-DVD noma kwi-USB ethile. Indlela yokukwenza kusuka ku-DVD:
Windows: Singarekhoda iso nge-Imgburn, I-UltraISO, i-Nero noma yiluphi olunye uhlelo ngaphandle kwazo ku-Windows futhi ngokuhamba kwesikhathi isinika ithuba lokuchofoza kwesokudla ku-ISO.
I-Linux: Bangasebenzisa ikakhulukazi leyo eza nezindawo zokuqhafaza, phakathi kwazo kukhona, I-Brasero, k3b, ne-Xfburn.
Indawo yokufaka ye-USB
IWindows: Bangasebenzisa Isifaki se-USB sonke noma i-Linux Live USB Creator, zombili kulula ukuzisebenzisa.
I-Linux: Inketho enconyiwe ukusebenzisa umyalo we-dd, kubalulekile ukuthi ubheke ukuthi iyiphi i-USB efakwe lapho ukuze uqhubeke nokurekhoda idatha kuyo:
Inqubo yokufaka yeXubuntu 18.04 LTS
Lapho sesilungiselele indawo yethu yokufaka, siyaqhubeka ukuyifaka kwimishini yethu ukuyivula.
Uma lokhu sekwenziwe esikrinini sokuqala, sizokhetha ukufaka i-Xubuntu bese siyivumela ukuthi ilayishe konke okudingekayo ohlelweni.
Lapho uhlelo selulayishiwe kukhompyutha, i-Xubuntu installation wizard izovela, esikrinini sokuqala salokhu izosicela ake sikhethe ulimi elizofakwa ngalo uhlelo olusha lweXubuntu 18.04 LTS.
Kulesi sibonelo ngikhetha iSpanishi bese ngichofoza ku- continue.
Ngikwenzile lokhu manje ngiyazi Izosicela ukuthi sifake isoftware evela eceleni futhi sifake nokuvuselelwa kweXubuntu ngenkathi inqubo yokufaka iqhubeka.
Ukuze sikwazi ukukhetha lokhu, kuyadingeka ukuthi sixhunywe kwi-Intanethi, uma sesikhethe esikufunayo, sichofoza kokulandelayo.
Ezinketho ezilandelayo, Izosikhombisa uhlobo lokufakwa nokuhlukaniswa kwamadiski.
Lapho ngokuyisisekelo noma sisula yonke idiski bese sifaka i-Xubuntu kuyo (qaphela le nketho, ingaholela ekulahlekelweni kwedatha okuphelele)
Noma kokunye ongakhetha kukho, sizokwazi ukwabela idiski ukufaka i-Xubuntu noma futhi singakha noma sinikeze ukwahlukanisa okulungiselelwe uhlelo esizodinga ukulunikeza ifomethi efanelekile, esele kanjena.
Thayipha ukwahlukanisa "ext4" nendawo yokukhweza njengezimpande "/".
Ya siyazi ngezinguquko esizenzayo, siyazamukela futhi sizothola isikrini sesaziso sezinguquko ezizokwenziwa kudiski uma sanelisekile futhi sivuma ukwamukela.
Ngaphandle kwalokho, ngincoma ukuthi ubuyekeze izingxenye zakho bese ukhomba lezo lapho unemininingwane ebalulekile futhi ugweme ukuzithinta.
Ngalokhu ukufakwa kohlelo kuzoqala, kunketho elandelayo izosicela ukuthi sikhethe indawo yethu yesikhathi ukuyilungiselela uhlelo.
Ukuqedela kuzofanele sakhe i-akhawunti yomsebenzisi enephasiwedi, Le phasiwedi ibalulekile ukuthi siyikhumbule ngoba kuzoba yiyo esizongena ngayo ngemvume futhi sisebenze ohlelweni.
Ekupheleni kokufakwa kuzodingeka ukuthi siqale kabusha ikhompyutha futhi sisuse imidiya nokufakwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Umhlahlandlela Wokufaka weXubuntu 18.04 LTS
URaul Plazas G kusho
Sawubona. Ngine-Ubuntu 17 futhi ngeke ingivumele ngithuthukele ku-18, ngesaba ukuthi kungenxa yokushoda kwamandla emishini. Ngimane ngiyinikeze ukuvuselelwa, futhi lapho inketho yokuvuselela ubuntu iphuma, ayiphenduli nhlobo. Ukufunda enetheni, kubonakala sengathi i-xubuntu isekela imishini enesizotha, futhi mhlawumbe leso yisixazululo. Kodwa-ke, angiqondi kahle ukuthi i-xubuntu izofakwa kanjani, esikhundleni se-ubuntu .. Ngikuthola kanjani ukuthi iyiphi i-USB efakwe kuyo?
Phendula uRaul Plazas G
Sawubona, ngifisa ukwazi ukuthi ngingalithola yini igama lomsebenzisi nephasiwedi ye-PC yami yakudala (2006), ebigcinwe ngaphandle kokusebenzisa futhi ngifuna ukuthola amafayela engiwagcinile, isikhathi eside ngakhohlwa igama lomsebenzisi nephasiwedi, angikwazi avule iPC.
ingabe ikhona indlela yokuxazulula lokhu?
Ungafaka i-hard drive kwenye i-PC ye-linux bese ukopisha konke kudrayivu yakho yangaphakathi (uma kungabhaliwe)
Isebenza kahle njalo. Kunezinto engingazazi okwamanje, kepha ihhovisi liyasebenza nakuma chemistry sithi uma into eyodwa isebenza, kuhamba kahle.
Ezinye izindlela zesiphequluli seFirefox ku-Ubuntu 18.04 LTS